တရုတ်ဖိနပ်စက်ရုံထဲကနေစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ - Ningbo Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အချိန်: 2018-11-02 hits:
စမ်းသပ်ခြင်းအချိန်: 30, စက်တင်ဘာ,2018
အရွယ်အစားအဟောင်းချုံ့မှိုပေါ်ပြုပြင်မွမ်းမံ Make 40, တဦးတည်းအဖုံးပြားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Injection ကိုဂိတ်နှင့် Runners နှင့်အတူ coupled.
အဆိုပါပစ္စည်းကိုဖောက်သည်ထံမှလာ, ရောဂါပျောက်ကင်း Curve အဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်:
စမ်းသပ်ခြင်းအပူချိန်:155℃ T10:1.51分 T90:3.15分
3，LRS-165 နှင့် Compression ကိုစက်အကြားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ:
1.စမ်းသပ်ခြင်း 1: တူပစ္စည်းများနှင့်မှို
ကို Compression စက်ယန္တရား
တစ်ဦးကbrasion R ကိုesistance
2.test 2: မြှုတ်ရော်ဘာစမ်းသပ်ခြင်း
LRS-165 ကိုလည်းမြှုတ်ရော်ဘာထုတ်လုပ်နိုင်သည်, နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏အလေးချိန် 526g ဖြစ်ပါတယ်, လျှော့ချ 13% အဆိုပါဖိနပ်စက်ရုံထံမှနမူနာထက်အလေးချိန်၏.
1.အနည်းဆုံး 50% ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်၏
တစ်ခုမှာအလုပ်သမားလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ် 2-3 စက်( 4-6မှို)
2.ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောအသီးအသီးအတွက် 70g ရော်ဘာပစ္စည်း Save
အကွောငျးရငျး: ချုံ့စက်အသုံးပြုတဲ့အခါ, ရော်ဘာပစ္စည်းအလေးချိန်နှင့်ကိုယ်တိုင် sheared ဖြစ်ပါတယ်. အပြည့်အဝစွာနိုင်ရန်အတွက်မှိုအခေါင်းပေါက်, အလုပျသမားအများအားဖြင့်မှိုအပေါ်ပိုပြီးပစ္စည်းတင်ထားတော်မူမည်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုပါပြတ်လပ်မှုချွတ်ယွင်းစေမည်.
အဆိုပါ LRS165 ရော်ဘာဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဆေးထိုးစက်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အလေးချိန်လုပ်ငန်းစဉ် PLC ကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်, နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် 1 300g အတွက်ဂရမ်. ကျနော်တို့ကဖိနပ်ဘဝါးအလယ်လိုင်း sheared လိုက်တဲ့အခါ, LRS165 နမူနာ၏အထူအချိုးကျနှင့်ချုံ့စက်နမူနာထက်ပိုမိုပါးလွှာခဲ့ကြသည်.
3. အဆိုပါပွန်းစားခြင်း Resistance စွမ်းဆောင်ရည်အများကြီးတိုးတက်, မှ 120 90 (အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာဖိနပ်စက်ရုံထဲကနေလာ)
အကွောငျးရငျး: အဆိုပါ Injection ကိုနည်းပညာနှင့်ကြီးမားသောညှပ်ဖိအားအင်အားစုအလွန်ရော်ဘာဖိနပ်ဘဝါး၏ယူနီဖောင်းအထူနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆတိုးတက်လာ. မြင့်မားသောတိကျသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်တင်းကြပ်စွာ Vulcanization Curve ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များညွှန်ကြားမှုအောက်ပါအတိုင်း.
အကွောငျးရငျး: အဆိုပါဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောစက်ရုံများအတွက်အရေးပေါ်အမိန့်အဆောတလျင်နိုင်ရန်အတွက်မှိုနံပါတ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှိသင့်. ဒါပေမယ့်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောအခါ, ကမှိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှော့ချရန်ကူညီပေးပါမည်.
အကွောငျးရငျး: automatic နှင့်တိကျသောရော်ဘာအလေးချိန်, အဆိုပါဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသော၏ယူနီဖောင်းအထူ, အဆိုပါအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောတိကျထိန်းချုပ်မှု, ဖိအားများနှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းအချိန်.
အကွောငျးရငျး: high-level ကိုနှင့်အလိုအလျောက်ကိရိယာများ, သာလွန်အလုပ်အဖွဲ့အခြေအနေ, ထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှု, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ.